५४ हजार लिटर पिसाबबाट ६० हजार लिटर बियर !
कोपन्हेगन, असार १५
डेनमार्कको कृषि तथा खाद्य परिषदले ‘नोरेब्रो ब्र्युगहुस’ नामक पेय पदार्थ उत्पादकसँग मिलेर यस्तो बियरको उत्पादन गरेको छ जो उत्पादन गर्न मानव मुत्र प्रयोग गरिएको छ।
सुन्दा ‘छि !’ लागे पनि पिसाबबाट सोझै बियर बनाइएको भने होइन। ‘शुरुमा पिसाबलाई बियर उत्पादनमा प्रयोग गरिएको भनेपछि धेरैले घीन माने, कतिपय हाँसे तर मानिसहरुले सोचेजस्तो पिसाब छानेर बियर बनाइएको होइन’ -बियर उत्पादक नोरेब्रो ब्र्युगहुसका प्रमुख कार्यकारी हेनरिक वाङ्गले मिडियालाई बताएका छन्।
कसरी बनाइयो त पिसाबबाट बियर ?
उत्तरी युरोपकै सबैभन्दा ठूलो सांगीतिक उत्सब मानिने ‘रोस्किल्दे फेस्टिभल’ हरेक वर्ष डेनमार्कमा आयोजना हुने गर्छ। विश्वभरका लाखौं आगन्तुक सहभागी हुने सो उत्सवमा मानिसहरु मस्तिले पिउने, झुम्ने र चल्तीको भाषामा ‘वाइल्ड’ हुने गर्दछन। हो, त्यसरी उत्सबमा भेला भएका आगन्तुकको पिसाब जम्मा गरेर त्यसलाई पुनर्प्रयोग गर्ने सोचका साथ् सन् २०१५ मा परिषदले रोस्किल्दे फेस्टिभलबाट ५४ हजार लिटर पिसाब जम्मा गर्यो। संकलित पिसाब बियर बनाउने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरियो।
धन्दा नमान्नुस, पिसाबलाई सोझै बियरमा प्रयोग गरिएको होइन। बियर बनाउन चाहिने अन्न (जौ) को उत्पादन गर्दा जनावरको मलमुत्रको वा कम्पोस्ट मलको साटो मानब पिसाब प्रयोग गरिएको हो। ५४ हजार लिटर मानब मुत्रलाई मलको रुपमा प्रयोग गरि फष्टाएको जौबाट बनाइएको बियरको नाम पनि त्यस्तै दिइयो- पिस्नर।
यहि मंगलबार डेनमार्कको कोपन्हेगनमा पिस्नर बियर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने हेतुले तीन घण्टा नि:शुल्क बाँडिएको थियो। घमाइलो दिनमा डिजे म्युजिकको साथमा सडकमै मजा लिंदै दुइसय जनाजतिले नयाँ बियर चाखेका र अलग तर गजबको स्वाद भएको प्रतिक्रिया दिएका प्रवर्द्धनकर्ताहरूले बताए।
संकलित ५४ हजार लिटर पिसाब प्रयुक्त जौ बाट ६० हजार बोतल बियर उत्पादन भएको र स्थानीय बजारका ‘इरमा’, ‘मेन्यी’ नामक बिक्रेता मार्फत बजारीकरण गरिने जनाइएको छ।
बियर पिएर गरेको पिसाब पुन: बियर बनाउने प्रयोजनको अन्न उत्पादनमा लगाउने उक्त बियरचक्र (बियर रिसाइकल) नाम दिइएको सो बिधि दिर्घकालिन र उपयोगी भएको विश्लेषण गरिएका छन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार १५, २०७४ ०७:११:१६